सुशान्तपछि अर्का यी अभिनेताले पनि पासो लगाएर ज्यान फाले, बलिउडलाई अर्को झड्का Canada Nepal
जनकपुरका पूर्वमेयर गिरीको कोरोनाभाइरसको संक्रमणबाट मृत्यु
भारतमा भयावह बन्दै कोरोना, एकैदिन भेटिए ६१ हजार बढी संक्रमित
चितवनका १६ जनासहित थप २१ जनामा देखियो कोरोना संक्रमण
डोटीमा बस दुर्घटना हुँदा ३ जनाको घटनास्थलमै मृत्यु, ३२ जना घाइते
निधन भएको ६ दिनपछि पूर्वमन्त्री बस्नेतका बाबुमा कोरोना पुष्टि, सयौंको संख्यामा थिए मलामी
काठमाडौं - बलिउड पछिल्लो समय एकपछि अर्को कलाकार गुमाइरहदा शोकमा डुबिरहेको छ । बलिउडले ऋषि कपुर, इरफान खान खान लगायतका चर्चित कलाकारहरु लगातार गुमाइरहेको छ । केही समयअघि बलिउडले अभिनेता सुशान्त सिंह राजपूतलार्य पनि गुमायो ।
अभिनेता सुशान्तले मुम्बईको बान्द्रास्थित आफ्नै घरको फेनमा पासो लगाएर आफ्नै ज्यान फाले। यसैबीच बलिउडले फेरि अर्का कलाकारलाई गुमाएको छ । भारतिय मिडिया नवभारत टाइम्सका अनुसार कन्नड टिभी अभिनेता सुशील गौडाले पनि पासो लगाएर आफ्नो ज्यान फालेका छन् ।
३० वर्षका सुशीलले मंगलबार पासो लगाएर ज्यान फालेको बताइएको छ । उनले रोमान्टिक सिरियल अन्तपुरामा पनि अभिनय गरेका थिए । उनले कन्नड फिल्म उद्योगमा आफुलाई स्थापित गर्ने प्रयास गरिरहेका थिए ।
उनले फिल्म सालागा’ मा काम गरेका थिए । यस फिल्म प्रदर्शनमा आउन बाकीा रहेको छ । यस फिल्ममा उनले पुलिसको भूमिका निर्वाह गरेका थिए । उनको निधनले अहिले बलिउड शोकमा डुबेको छ ।
आषाढ २४, २०७७ बुधवार १६:४९:०० बजे : प्रकाशित
लकडाउनले भेट्न नपाएका प्रेमिल जोडीको पीडायुक्त गीत ‘जहाजै चढेर’मा दयाहाङकाे दमदार अभिनय
काठमाडौं । गीत संगीत मन नपराउने सायदै होलान् । गीत संगीत सुनेर मानिसमात्रै होइन हर प्राणी मन्त्रमुग्ध हुन्छन् । संगीतले सबैलाई आकर्षित गर्छ । गीतले मानिसको ध्यानमात्रै आकर्षित गर्दैन, उसलाई ऊर्जा र प्रेरणा जगाउने काम पनि गर्छ । गीत र संगीतले मानिसको मन छुनु पर्छ । शब्दले दिमाखमा स्थान जमाउन सक्नु पर्छ ।
तर, हिजोआज बजारमा आएका सबै गीतले दिमाखमा स्थान जमाउन सकेको देखिँदैन । दर्शक र स्रोताको हृदयमा बसिरहने भन्दा पनि युट्युबमा बढी भ्युज आउने र सस्तो लोकप्रियतालाई ख्याल गरेर गीतहरु सार्वजनिक हुन थालेका छन् । जसले सँगै सार्वजनिक भएका जीवन्त गीत ओझेल पर्ने गरेका छन् ।
दर्शक र स्रोताले पनि तडकभडकलाई रुचाउँदा सांगीतिक क्षेत्र पनि सस्तो लोकप्रियताको बाटोमा अग्रसर भएको देखिन्छ । यसलाई रोक्नु पर्ने दायित्व सबैको हो । गीतले स्रोता र दर्शकको मनमुटुलाई छुनु पर्ने हालै ‘जहाजै चढेर’ गीत सार्वजनिक गरेका गायक अमृत क्षेत्रीको बुझाइ छ ।
दुई दशकदेखि सांगीतिक क्षेत्रमा रहेका गायक अमृत स्रोता र दर्शकको चाहना र मागलाई ध्यान दिएर सस्तो लोकप्रियताका लागि भन्दा पनि जीवन्तता ख्याल गरेर गीत ल्याउनु पर्ने बताउँछन् । युट्युब देखिने भ्युज नै गीत संगीतको मापन बन्दा जीवन्त गीतहरु ओझेलमा परेको उनको बुझाइ छ । गीत सुनिरहँदा मनोरञ्जन दिनेमात्रै होइन पछिसम्म केही सकारात्मक छाप दिने खालको हुनुपर्ने तर्क गरेका गायक अमृत भन्छन्, ‘युट्युबको ट्रेन्डिङ र भ्यूजका लागि गीत ल्याउने चलनको विकास भइरहेको छ । तर, यसले सांगीतिक क्षेत्रलाई सस्तो लोकप्रियतामा भुलाउने छ ।’
नेपाली सांगीतिक क्षेत्रमा अहिले राम्रा र जीवन्त गीत भाइरल नभएका भने होइनन् । तर, तुलनात्मक रुपमा चर्चा कमाउनका लागि ल्याइएका गीतले बजार ओगेटको उनको अनुभव छ ।
२०५७ सालबाट सांगीतिक क्षेत्रमा प्रवेश गरेर २०६१ सालमा पहिलो गीत ‘जोगी’ ल्याएका उनले प्रविधिको विकासले अहिले जबरजस्त दर्शक र स्रोतालाई गीत सुन्न बाध्य बनाइएको बताउँछन् ।
गीत समाजको पथप्रदर्शक पनि हो । गीत र संगीतले विश्व परिर्वतन गर्न ल्याकत राख्छ । ठूल्ठूला आन्दोलन र प्रदर्शनमा गीतको महत्व बढ्दै गएको छ । नेपालको राजनीतिक परिवर्तनका लागि भएका सशक्त आन्दोलनमा पनि गीत संगीतको उत्तिकै भूमिका देखिएका छ ।
यसर्थ गीतले सधैं ऊर्जा र सकारात्मक सोचको विकास गराउनु पर्ने गायक अमृत बताउँछन् । यसलाई ध्यानमा राखेर अहिले आफूले ‘जहाजै चढेर’ गीत ल्याएको उनले बताए । सो गीतमा जहाज चढेर परदेशीएका नेपालीको कथा समेटिएको जानकारी दिँदै उनले सो गीतमा लकडाउनका कारण आफ्नो मायालुलाई भेट्न नपाएका जोडीको कथा रहेको बताए ।
‘जहाजै चढेर’ गीतमा गायक अमृत क्षेत्री र गायिका मेलिना राईको स्वर रहेको छ भने शब्द र कम्पोज पनि गायक अमृतकै रहेको छ। थिएटर शैलीमा बनाइएको सो गीतको भिडियोलाई निकेश खड्काले निर्देशन गरेका छन् भने दयाहाङ राईको उत्कृष्ट अभिनय रहेको छ । जसमा केनिपा सिंह पहरीको पनि अभिनय रहेको छ ।
श्रावण २७, २०७७ मंगलवार १९:४५:५३ बजे : प्रकाशित
# नेपाली संगीत
निशानले प्रेमिका ऋचासंग गरे विवाह
युवापुस्ताका चर्चित गायक निशान भट्टराईले विवाह गरेका छन् । कृष्ण जन्माष्टमीको अवसर पारेर निशानले प्रेमिका ऋचा न्यौपानेसंग कानुनी विवाह गरेका हुन् । काभ्रे धुलिखेल बस्ने ऋचासंग जिल्ला अदालत धुलिखेलमा उनले कानुनी रुपमा विवाह गरेका हुन् । निशान र ऋचाले एक म्युजिक भिडियोमा साथ काम समेत गरेका छन्।
श्रावण २७, २०७७ मंगलवार १४:५८:३२ बजे : प्रकाशित
प्रदिप र पलले साईन गरे बिग बजेटमा बन्ने कमेडी फिल्म
काठमाडौं - कोरोनाभाइरसका कारण रोकिएको चलचित्रका कामहरु अहिले धमाधम शुरु भएका छन् । यस्तै चर्चित निर्माता सन्तोष सेनले नयाँ चलचित्र निर्माण गर्ने भएका छन् ।
चलचित्र 'प्रेमगीत' बाट चर्चा कमाएका निर्माता सन्तोषले अब नयाँ चलचित्र 'हुतुतु' निर्माण गर्दैछन् । यस चलचित्र कमेडी हुने बताइएको छ ।
चलचित्रलाई छेतन गुरुङ र सन्तोष सेनले संयुक्त रुपमा निर्देशन गर्नेछन् । चलचित्रको लागि नयाँ कलाकारहरु पनि छनोट गरिसकिएको छ ।
चलचित्रमा हरिवंश आचार्य, माओत्से गुरुङ, राजाराम पौडेल, प्रदिप खड्का, पल शाह, गौरव पहारी, सलोन बस्नेत, नाजिर हुसेनको अभिनय रहने बताइएको छ । यस चलचित्र ठुलो लागतमा निर्माण हुने निर्देशक सेनले बताएका छन् ।
यस चलचित्रको छायांकन अर्को बर्षबाट शुरु हुने बताइएको छ । धेरै दर्शकहरुले प्रदिप र पललाई एकसाथ एकउटै चलचित्रमा देख्न चाहन्थे । अब भने त्यो पुरा हुने भएको छ ।
श्रावण २७, २०७७ मंगलवार १२:३४:३८ बजे : प्रकाशित
# हरिवंश आचार्य
# प्रदिप खड्का
प्रकाश सुवेदीले माफी मागेको भएन, सबैको अगाडी माफी माग्नु पर्छ अब (भिडियो)
काठमाडौ । नायिका पूजा शर्मा र पत्रकार प्रकाश सुवेदी बीचको विवाद बारे चलचित्र कलाकार संघका अध्यक्ष रविन्द्र खड्काले आफ्नो धारणा व्यक्त गर्दै भने, "पत्रकारले प्रयोग गरेको शब्द अपाच्य नै थियो र वहाँले अब सबैको अगाडी माफी मागे मात्र यो विवाद सुल्झिन्छ ।"
पत्रकार प्रकाश सुवेदीको कार्यक्रममा पूजा शर्माले अन्तर्वार्ता दिएकी थिईन जुन अन्तर्वार्ता सामाजिक संजालमा विवादमा समेत तानिएको थियो । उक्त अन्तर्वार्तामा पूजा शर्माले नेपालको बारेमा सामान्य ज्ञान नजानेकोले उनको ब्यापक आलोचना भयो । उक्त अन्तर्वार्तामा सामान्य ज्ञानको अंश राम्रो नभएकोले हटाइदिन आग्रह गरेको तर प्रकाश सुवेदीले जस्ताको त्यस्तै प्रसारण गरेको पूजा शर्माले आरोप लाएकी थिईन ।
प्रकाश सुवेदीले पनि पूजाको खण्डन गर्दै फेरी कार्यक्रममा भने, "कलाकार भनेको देशको 'ब्राण्ड एम्बेसेडर' जस्तै हो त्यसैले सामान्य ज्ञान भने जान्नुपर्छ नत्र विदेश जाँदा कसैले देशको बारेमा सोध्दा आएन भने के होला ?" प्रकाश सुवेदीले यसरी खण्डन गरे पश्चात पूजा शर्माले आफू अब फेरी पत्रकार सुवेदीसंग अन्तर्वार्ता नदिने कुरा सार्वजनिक रुपमा भनिन् । यस पश्चात प्रकाश सुवेदीले रजतपट कार्यक्रम मार्फत घुमाउरो तरिकाले 'दारा निस्किएकोलाई महानायिका भनिदिनु पर्ने' भन्दै अभिव्यक्ति दिए जसले गर्दा पूजा शर्मा मानसिक तनावमा पुगेकी थिईन ।
यो पनि पढ्नुहोस : पूजा शर्मा रुँदै जब पुगिन् उजुरी दिन... (भिडियो)
पूजा शर्मा मानसिक तनावमा पुगेको भन्दै चलचित्र कलाकारसंघ पुगेर प्रकाश सुवेदी विरुद्ध उजुरी दीइन । साथै 'एपी वान टिभी' मा समेत पुगेर प्रकाश सुवेदीको कार्यक्रमको बारेमा उजुरी दिईन । प्रकाश सुवेदीले भिडियो सार्वजनिक गर्दै माफी मागेका छन् ।
चलचित्र कलाकार संघका अध्यक्ष रविन्द्र खड्काले यहि विषयमा आफ्नो धारणा व्यक्त गर्दै क्यानाडा नेपालसंग भने, "प्रकाश सुवदीले प्रयोग गर्न नहुने शब्द टेलिभिजन कार्यक्रममा प्रयोग गरे पश्चात पूजा शर्मा मात्र होईन धेरै कलाकारहरु रिसाएका छन् । त्यसैले वहाँले त्यसरी माफी माग्दैमा मात्र हुदैन जस्तो लाग्छ । वहाँले सबै सामू बसेर माफी माग्नु भयो भने मात्र यो विवाद सहज तरिकाले सुल्झिनेछ ।"
"मैले प्रकाश जीलाई फोन गरेर यस विषयमा सोध्दा आफू बोलाएको समयमा आएर विवाद सुल्झाउने भन्नु भएको छ । वहाँसंग अरु धेरै कलाकारहरु समेत रिसाउनु भएकोले वहाँले राम्रोसंग माफी मागेर यो विवाद सुल्झाए राम्रो देखिन्छ ।" अध्यक्ष खड्काले भने ।
श्रावण २६, २०७७ सोमवार १९:५४:०० बजे : प्रकाशित
# नायिका विवाद
सालको पातको ‘भ्यूज’ हालसम्मकै सर्वाधिक, ६ करोड २१ लाख बढी
बागलुङ - लोकदोहोरी गीत ‘सालको पातको टपरी’ युट्युबमा सार्वजनिक भएको आउँदो साता २३ महिना पुग्दैछ । यस बीचमा गीतको म्युजिक भिडियोले युट्युबमा छ करोड २१ लाख बढी ‘भ्यूज’ बटुलेको छ ।
गीतमा कुलेन्द्र विश्वकर्मा र विष्णु माझीको मीठो स्वर भर्नुभएको छ । युवा पुस्ताका गीतकार नवराज पन्तको शब्दमा वसन्त थापाले सङ्गीत दिनुभएको छ । स्रोता÷दर्शकले अत्यधिक रुचाएपछि गीतले एकाएक चर्चा र प्रसिद्धि कमाएको थियो । अहिले पनि गीतको भ्यूज निरन्तर बढेको छ । पछिल्लो एक महिनामा झण्डै दश लाख पटक हेरिएको छ । “स्रोताको मन जित्नु ठूलो कुरा रहेछ, व्यावसायिक हिसाबले पनि गीत सफल रह्यो”, सङ्गीतकार थापाले भन्नुभयो ।
झ्याउरे लयमा ठेट जनजीब्राका शब्द र मनछुने स्वरले गीतमा प्राण भरेको छ । कुशल अभिनय र नृत्यले दर्शक लोभ्याउँछ । म्युजिक भिडियोमा नायिका मरिष्का पोखरेलसँगै गायक विश्वकर्मा र सङ्गीतकार थापाको अभिनय छ । निर्देशन शिव विकले गर्नुभएको छ । हाल अमेरिकामा रहनुभएका गीतकार पन्तका अनुसार गीतमा प्रेममा सिर्जित अविश्वास र त्यसको भोगाइको कारुणिक यथार्थबादी कथा छ । “मानवीय प्रेम र सम्बन्धमा आउने उतारचढाव गीतको रचनागर्भ हो”, उहाँले भन्नुभयो ।
गायक विश्वकर्माले गीतले यतिसम्म चर्चा पाउँला भनेर पहिले नसोचिएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । उहाँको साङ्गीतिक जीवनको मानक गीतका रुपमा सालको पातलाई सधैँ सम्झिने छ । अभ्यास डिजिटल म्युजिक प्रालिद्वारा निर्मित गीत ‘वसन्त थापा’ नामको युट्युब च्यानलबाट सार्वजनिक भएको थियो । एक लाख सब्सक्राइबर (युट्युब च्यानलको समूह सदस्य) पुगेपछि उक्त च्यानलले अर्वाडसमेत पाइसकेको छ ।
शुरुमा युट्युब एकाउन्ट परीक्षणमा रहने र मोनिटाइज भएपछि मात्र पैसा आउने कलाकार बताउँछन् । श्रव्य क्यासेट, सिडी, सिआरबिटी हुँदै सङ्गीत व्यवसाय अहिले युट्युबमा केन्द्रित छ । प्रविधिको फड्कोले सङ्गीत बजारको स्वरुप बदलेको हो । सालको पातले पनि सम्बन्धित लगानीकर्ता÷कलाकारलाई आकर्षक कमाइ दिलाएको छ । गायक विश्वकर्मा र सङ्गीतकार थापाबीच अर्को लोकदोहोरीमा पुनः सहकार्य हुँदैछ । “शब्द रचना प्रह्दाद सुवेदीले गर्नुभएको छ, गायिका को राख्ने निश्चित भइसकेको छैन”, थापाले भन्नुभयो ।
भिडियो छायाङ्कन सपुतकै जन्मघर बागलुङ धम्जामा गरिएको छ । गीतले परम्परागत रोधीको झल्को दिन्छ । मौलिक शब्द, सङ्गीत र प्रस्तुतीकरणका कारण गीतलाई स्रोता÷दर्शकले रुचाएका हुन् । कथात्मक शैली, अनौपचारिक प्रस्तुति, ठेट सम्वाद र जीवन्त अभिनयले दर्शक गीतमा लोभिन्छन् । उक्त गीत भाका नेपाल प्रालिले निर्माण गरेको हो । सपुतको गत साता सार्वजनिक तीज गीत ‘बदला बरीलै’ पनि अहिले युट्युब ट्रेन्डिङको नं एकमा छ । गीतको भ्यूज २४ लाख नाघेको छ । रासस
श्रावण २६, २०७७ सोमवार ०८:२२:१२ बजे : प्रकाशित
# सालको पात
आफ्नो अभिव्यक्तिप्रति माफी मागे प्रकाश सुवेदीले
काठमाडौं । पत्रकार तथा निर्देशक प्रकाश सुवेदीले आफ्नो विवादास्पद अभिव्यक्तिप्रति माफी मागेका छन् । टेलिभिजन कार्यक्रम ‘रजतपट’मा अभिव्यक्त भएको विवादास्पद अभिव्यक्तिप्रति उनले माफी मागेका छन् ।
पत्रकार प्रकाशले भनेका थिए, ‘आफंै नजान्ने अनि हामीले चाहिँ लिएको इन्टर्भ्यू काटिदिनु पर्ने? मिलाई मिलाई महानायिका बनाइदिनु पर्ने? त्यो पनि दाह्रा निस्किएको अनुहारलाई?’
तर, सो अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै नायिका पूजा शर्माले आइतबार चलचित्र कलाकार संघमा उजुरी दिएकी छन् भने पत्रकार सुवेदीको चर्काे आलोचना भइरहेको थियो ।
आइतबार बेलुकमा पत्रकार सुवेदीले आफ्नो अभिव्यक्तिले कसैलाई चोट पुगेका भए माफी चाहन्छु भनेका छन् । कसैप्रति लक्षित र गलत उद्देश्यले सो नभनेको भन्दै उनले व्यक्ति विशेष नभएको र ‘दाह्रा’ शब्द प्रतिकात्मक रहेको बताएका छन् ।
यद्यपि सो शब्द प्रयोग हुनु दुखद् रहेको भन्दै उनले अब उपप्रान्त शब्द प्रयोगमा ध्यान पु¥याउने प्रतिबद्धता जनाउँदै आफ्नो अभिव्यक्तिले कसैलाई चोट पुगेको भए माफी चाहन्छु भनेका छन् ।
श्रावण २५, २०७७ आइतवार २०:१६:५९ बजे : प्रकाशित